Faahfaahinta kaamirooyinka Xiaomi Mi CC9 Pro ayaa shaaca laga qaaday | Androidsis
Bishii Nofeembar 5, Xiaomi Mi CC9 Pro ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa, Taleefannada casriga ah ee shirkadda maanta laga filayo. Tani waa sababta oo ah waxay noqon doontaa tii ugu horreysay adduunka ee yeelata kamarad 108 MP ah, in ka badan wax kasta oo kale.
Waxaa la ogyahay in terminal-ka lagu qalabeyn doono waxyaabo fara badan oo heer sare ah oo heer dhexe ah iyo qeexitaan farsamo, laakiin aan wax badan ka ahayn nidaamka kamaradaha ay adeegsan doonto. Sidaa darteed, si loo caddeeyo wax badan oo ku saabsan qaybta sawir qaadista ee moobilkan, Shirkadda Shiinaha ayaa soo bandhigtay laba boodhadh cusub oo faahfaahinaya wax walba oo ku saabsan dareemayaasha qalabkan.
Waxay u muuqataa taas Xiaomi Mi CC9 Pro wuxuu noqon doonaa taleefankii ugu horreeyay ee soo saaraha Shiinaha ah ee la yimaada muraayadaha 'periscope lens'. Muraayadda koowaad ee shanta kamaradood ee gadaal gadaal ayaa la dhihi doonaa muraayadaha ka dhigaya taleefanka taageerada 5x zoom optical, 10x zoom hybrid, iyo 50x zoom digital.
Muraayadda labaad waa muraayad toosan oo 50 megapixel 12mm ah oo cabbirkeedu weyn yahay 1,4 micron pixel weyn; waxay taageertaa laba PD autofocus waxayna leedahay furitaan f / 2.0 ah. Muraayadda saddexaad waa a 108 megapixel lens oo ay sameysay Samsung; Waa dareeraha 1 / 1.33-inch oo leh qiime furitaan f / 1.7. Ta afraadna waa 20 megapixel super lens aad u ballaadhan oo leh aragti dherer ah 117 aragti. Midda dambe waa muraayadaha 'super macro lens' oo leh dherer dhererkiisu yahay 1,5 cm.
Xiaomi ayaa shaaca ka qaaday in muraayadaha 108 megapixel iyo periscope ay ku qalabaysan yihiin taageero loogu talagalay xasilinta sawirka indhaha (OIS). Sidaad u jeeddo, dhammaan shanta kamaradood waxaa caawiya bir laba-geesood ah. Intaa waxaa dheer, sida xaqiiqda xiisaha leh, shirkaddu waxay xaqiijineysaa in kharashka kaamirooyinka taleefanka uu shan jeer ka sarreeyo kan moduleka sawir ee Mi CC9.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Faahfaahinta kaamirooyinka Xiaomi Mi CC9 Pro ayaa shaaca laga qaaday